Ulises Padrón: “Ao Amin’ny Fiarahamonina [Kiobàna], Mihamiseho Ny Olona sy ny Vondrona LGBTQI” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2018 12:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, русский, Español
“Tsy any amin'ny hoe te-hivady na tsia ny adihevitra, fa any amin'ny fananana zo hampiasa io andry io rehefa tiany izany. Tsy misy olona marary isanandro, kanefa ao Kiobà, rariny ny filazàna fa tsy hamela anao eo ambaravarana mihitsy ny hopitaly satria ianao mainty, sarim-bavy, na mahantra. Fa mila eo ambany sy arovan'ny lalàna fotsiny. ” Sarin'ilay mafana fo, Ulises Padrón Suárez, nahazoana alalàna avy aminy.
Ulises Padrón Suárez dia ilay tanora mpanorina sy mpandrindra ny Youth Network for Health and Sexual Rights of the National Center for Sexual Education (CENESEX) na ny Tambajotran'ny Tanora Natao ho an'ny Fahasalamana sy ny Zo Ara-pananahany ao amin'ny Foibem-pirenena momba ny Fampianarana Ara-pananahana ao Kiobà. Talohan'ny nidirany tao amin'ilay Vondrona, nandray anjara taminà fampianarana sy atrikasa maro nampitaina tao izy, izay nanova azy ho mpiaro ny ara-pahasalamana sy ho mpikatroka mafana fo tsy manam-paharoa. Fito taona taty aorian'ny naha-mpikatroka mafana fo azy, nahaliana ny Global Voices (GV) ny fanehoankevitr'i Suárez momba ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana izay mbola voarara hatrany ao Kiobà, kanefa raharaha miha-maika ao amin'ny firenena.
Global Voices (GV): Heveriko fa irinao tokoa ny hahafahan'ny olon-droa mitovy fananahana hisoratra ara-panjakana ao Kiobà; araka ny hevitrao, nahoana no tokony hoheverina izay sosokevitra izay ?
Ulises Padrón Suárez (UPS): Indrisy, ny hevitry ny vahoaka ao Kiobà dia mbola ny hoe tokony handalo fitsapankevi-bahoaka aloha ny fanekena ny fanambadiana eo amin'ny samy lahy na ny samy vavy vao avadika ho lalàna, toy ny hoe nahodinkodin'ny marimaritra iraisana feno tsindrihazolena sy mpandàla ny fanambadian'ny tsy mitovy taovam-pananahana ao amin'ny “establishment” ao amin'ny nosy (izay tsy ny herin'ny ngezalahy amin'ny fitondràna ihany, fa koa ny manampahaizana, ny mpanao gazety, indrindra indrindra no ho hitanao ao) io fomba fiditra io. Na izany aza, ao amin'ny fiarahamonina misy antsika, miha hita soritra ny LGBTQIA [Lesbienne, Gay, Bisexual, Queer, Intersex, Asexual] ary mazava ho azy, mahazo hery eny amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ireo fitakiana. Ny tsy firaharahiana azy ireo na ny tsy fanomezana azy ireo ny fifantohan-tsaina sy ny fanajana mendrika azy, dia fandàvana ny zo feno ho an'ireo olom-pirenena izay mahita fa voafehy ny hetsika ara-tsosialin'izy ireo.
Nahatonga fifandirana teo amin'ireo mafana fo sy ny mpanapa-kevitra ao amin'ny governemanta ny firesahana ny zon'olombelona ao Kiobà hisian'ny fahalalàna ny lalàna sy ny fanehoana azy (izay mbola lavitra antsika). Vokatr'izany, na dia manaiky, miahy sy miaro fehezana zo maromaro aza ny firenena (ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny kolontsaina, ny asa) misy zavatra hafa izay tavela ho an-jorom-bàla anefa ao amin'ny firenena sy ao amin'ny toedraharahan'ny faritra amin'izao fotoana izao.
GV: Ianao ve mahafantatra tranga ao Kiobà na arira izay nahatonga olona, noho izy ireo tsy mpivady ara-dalàna , hiaina zavatra tsy rariny ?
UPS : Eny, mpivady, izay nodimandry ny iray tamin'izy roa ary norobain'ny fianakavian'ilay nodimandry avokoa ny fananana niraisan'izy sy ilay iray velona satria tsy misy lalàna miaro amin'ny toe-javatra toy izany
GV: Mihevitra ve ianao fa tokony hisy fitsapankevi-bahoaka hanapahana na tsia ny tokony hampanarahan-dalàna ny fanambadiana eo amin'ny samy lahy/vavy ao Kiobà ?
UPS : Tsy mieritreritra an'izany aho, tsia. Mino aho fa tokony ho lasa lalàna avy hatrany izany, ary tokony hajoro ny fotodrafitrasa iray ara-panjakana izay miahy sy miaro azy io sy zo hafa koa. Ny fanekena ny mariazy, ny fampanarahan-dalàna ny fiarahana, na izay tianao hiantsoana azy fa tokony tsy hanavakavaka sy halalaka tsara mba hahafahan'ny olom-pirenena misitraka azy.
GV: Fantatray fa ao anatin'ilay tolodalàna vaovao momba ny Fianakaviana, izay mbola tsy natolotra tao amin'ny parlemanta Kiobàna, dia tsy tafiditra ao ny Fanambadiana ho an'ny daholobe fa ny “fiarahana nifanekena” no atolotra ao. Ahoana ny hevitrao momba izany ?
UPS : Fanavakavahana izany! Indrindra indrindra, raha takatsika fa laika ny fanjakana nanomboka tamin'ny taona 1901 ka noho izany tokony hanana rafitra mitovy amin'izany isika rehetra mba hamolavola ny fiarahantsika, izany hoe ny fanambadiana — tsy asiana mpamaritoetra, tsy asiana fepetra.
Ny fanàfana ihany koa ny fanambadiana, amin'ny maha-rafitra “heteronormative” azy, efa niaina krizy nandritra ny taonjato maro izy io. Mila mieritreritra rafitra hafa indray isika izay manaiky ny “polyamory” (hamaroam-pitiavana), ohatra, na manao izay hijerena ny maha-olona kokoa ny fiarovana ny lova rehefa misy fifamaliana noho ny fahafatesana, eo amin'ny fianakaviana na ny fanjakana.
GV: Nilaza i Ernesto Martínez Hernández, izay mpaneho hevitra iray tao amin'ilay lahatsoratra hoe “Tokony hajanontsika ny fijerena ny tenantsika amin'ny endriny voasamantsamaka”, navoakan'ilay mpanao gazety Lisandra Fariñas tao amin'ny gazety Granma (sampan'ny Antoko Kominista ao Kiobà): ” Tsy fanajàna ny fiarahamonina ny famelàna ny fanambadiana pelaka, toy ny tsy maha ara-dalàna ny famelàna ny fanambadian'ny olona sy ny biby. Tsy tokony hoeken'ny lalàna izy ireny satria tsy voajanahary. Misy olon-droa miaraka miaina ny fiainany manontolo nefa tsy mivady satria tsy misy dikany ny hiadiana ny hamadihana ho ara-dalàna ny zavatra efa tsy mety ara-boajanahary. ” Ahoana no havalinao an'ity fanehoankevitra iray ity ?
UPS : Tsy hitako ilay lahatsoratra, heveriko fa nesorin'izy ireo izany satria tsy “marina ara-politika”. Fa mibaribary ny tsy firaharahiany sy ny tsy fahalalany .
Ireo lehilahy no nametraka ny zavatra eken'ny maro ho fenitra (raha ny ara-tantara), noho izany, afaka miova izany, toy ny tamin'ny fahagola rehefa nialàna ny “modely Ptolemaika hankanesana amin'ny an'i Copernic”. Misy ifandraisany amin'ny toerana ijoroanao sy ny fifanarahana ataonao ilay izy. Raha tsy izany, tsy afaka ny hiresaka amin'io olona io ianao. Tena antenaiko izy tsy ho mpandala firaisana amin'ny biby .
Tsy any amin'ny hoe te-hivady na tsia ny adihevitra, fa any amin'ny fanànan'ny olona ny zo hampiasa io andry io rehefa ilainy izany. Tsy misy olona marary isanandro, kanefa ao Kiobà, azo atao ny milaza fa tsy hamela anao eo an-tokonana mihitsy ny hopitaly satria ianao mainty, sarimbavy/sarindahy, na mahantra. Fa resaka momba ny hoe eo ambany sy voaharo ny lalàna fotsiny.